Toeram-piompiana miaramila sy ivon-toerany any Espana Soavaly Noti
Jenny monge | | soavaly, Karazan-tsoavaly, fandikana
Ilay fantatra amin'ny hoe "Yeguada Militar" dia manomboka any Espana aorian'ny fanovana ara-tsosialy sy toekarena novokarin'ny Adin'ny Fahaleovan-tena. Nanomboka ny vanim-potoana politika izay hampitsahatra ny Fitondrana Taloha, izay mitarika amin'ny saika fanjavonan'ny toeram-piompiana stud lehibe tany amin'ny firenena izany. Niteraka olana teo amin'ny famatsiana ho an'ny tafika izany.
Te hahafantatra ny zava-nitranga ve ianao?
Manoloana an'io toe-javatra io, tamin'ny 1864, ny governemanta Isabel II, dia namoaka a Didim-panjakana izay nanolorana ny fandaminana indray ny fiompiana soavaly ho an'ny fitaovam-piadiana miaramila an'ny fanjakana Espaniola.
Ny iray amin'ireo dingana voalohany nalain'izy ireo dia ny famoronana tahiry fametrahana. Taty aoriana, tamin'ny 1893, namorona toeram-pambolena stud izay hanangona ny toetra sy ny tanjona lehibe hamahana ny tsy fisian'ny soavaly ho an'ny tafika. Nandritra izany fotoana izany no niasan'izy ireo manatsara ny karazany efa misy. Ny foibe voalohany an'ity mpitaingin-tsoavaly ity dia i Córdoba.
1 Toeram-piterahana sy fiompiana soavaly any Espana
1.1 Ivotoerana fiompiana soavaly miaramila any ilavila
1.2 Ivontoerana miaramila mpiompy soavaly Écija
1.3 Ivotoerana miaramila miteraka soavaly Jeréz
1.4 Fianarana miaramila Lore-Toki
1.5 Caballar de Mazcuerras Ivotoerana fiompiana miaramila (Cantabria)
1.6 Ivontoerana fiompiana miaramila Caballar de Zaragoza
Toeram-piterahana sy fiompiana soavaly any Espana
Any Espana dia afaka mahita ivon-toerana fiompiana soavaly enina FAS izahay, ary laboratoara fikarohana ao Córdoba.
Andao hiresaka kely momba ireo ivon-toerana ireo:
Ivotoerana fiompiana soavaly miaramila any ilavila
Tamin'ny voalohany io foibe io dia noforonina tamin'ny anaran'ny «Stotron'ny soavaly faha-6» avy amin'ny Royal Order an'ny 22 martsa 1905, miorina amin'ny tanànan'ny Alcalá de Henares.
Roa am-polony taona taty aoriana, nisy fizarana malaza nampiana tao Trujillo (Cáceres) ary novana ny anarana hoe «Deposit of Stallions of the First Livestock Zone».
Tamin'ny 1931, ireo serivisy fiompiana soavaly ireo dia nanjary ampahany tamin'ny Minisiteran'ny Fampandrosoana, nandao ny Ministeran'ny Ady. Na izany aza, tsy ela dia hiverina ny miankina amin'ny Ministeran'ny Ady. Nanomboka tamin'izay nanohy nantsoina tamin'ny anarana samihafa nifandimby. Tany Ávila no nisy azy io mipetraka ao amin'ny toeram-pambolena El Padrillo.
Ivontoerana miaramila mpiompy soavaly Écija
Ny tantaran'ity foibe ity Azo zahana hatramin'ny 1946 izany, rehefa noforonina tao Pau ny faritra Mares de Tiro del Norte (Gerona) ary miankina amin'i Córdoba izany. Ho an'ity, telo ambin'ny folo ardennes mares ary telo ambin'ny folo izay tafita niaraka tamin'i Bretons.
piompiana volavolan-tsoavaly tena ilaina ny mahaleo tena amin'ny fanafarana avy any ivelany, ankoatry ny famokarana omby ho an'ny asa mavesatra.
Ireo zana-kazo ireo dia hampiditra tsikelikely an'i Bretonn sy postier-Breton izy ireo izay nanomboka rakotra soavaly soavaly nanatsoaka hevitra fa ireo hazakazaka ireo no tena nifanaraka tamin'ny toe-tany Espaniola.
Tamin'ny 1990 dia namboarina indray ny fiompiana soavaly, namindra ny faritra Draft Horses ho any Écija.
En 2007 Niorina ny Ivontoerana Miaramila Écija Horse, izay nampivondrona ny Écija Stallion Depot sy ny Écija Military Stud. Ny foibe dia notendrena hitandrina ny soavaly amin'ny toe-piainana tonga lafatra, manatanteraka fitsapana fiterahana sy fiterahana matetika, manolotra ny fametrahana ny Parade State, manatrika ny filan'ny mpiompy sy ny filankevitry ny tanàna, ary manolotra ny famindrana soavaly ho an'ny tantsaha tsy miankina izay mahafeno ny fepetra takiana, mandritra ny fe-potoana fandrakofana.
Ivotoerana miaramila miteraka soavaly Jeréz
Ity ivon-toerana ity dia noforonina tamin'ny 2006 niaraka tamin'ny fampidirana ny Yeguada Militar sy ny Depósito de Sementales de Jeréz. Toy izany koa, ny omby rehetra sy ny akora ara-pitaovan'ny roa tonta dia nanjary anisan'ny Ivotoerana miaramila vaovao an'ny Cría Caballar de Jeréz de la Frontera.
Ny Jeréz Military Stud dia naorina tamin'ny 1893 miaraka amin'ny tanjona ny hanangona foal izay hanatsara ny toetra sy ny toetoetran'ny Soavaly Saddle ho an'ny Tafika Remonto. Ho fanampin'izany, te-hanao toy izany koa izy ireo amin'ny karazana hazakazaka sy ny fitifirana. Tamin'ny voalohany dia napetraka tao amin'ny Dehesa de Moratalla any Hornachuelos (Córdoba) ny toeram-pambolena.
Nandritra ny Regency of María Cristina, naneho hevitra izahay tamin'ny fiandohan'ny lahatsoratra fa ny Fitoeran'ny soavaly, voatendry ny iray tamin'izy ireo Jerez tamin'ny 1841.
Fianarana miaramila Lore-Toki
Ny fanohanana avy amin'ny fitantanan'ny miaramila amin'ny fiompiana soavaly anglisy Thoroughbred any Espana dia fohy dia fohy tany am-piandohana, tsy misy afa-tsy an-tsokosoko dimy an'io karazana io ao amin'ny tobin'ny miaramila any Córdoba tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. ny King Alfonso XIII dia nankafy fatratra ny Thoroughbreds anglisy sy ny hazakaza-tsoavaly. Noho izany ao amin'ny 1921, ny English Thoroughbred Section dia natsangana tao Marquina (Guipúzcoa), nohofana tamin'ny Count of Urquijo. Tamin'ny fahatongavan'ny Repoblika tamin'ny 1931, dia niato kely ny fifaninanana hazakaza-tsoavaly ary nafindra tany amin'ny Cordovan Military Stud io faritra vaovao io.
Tamin'ny 1940 ny jeneraly Franco dia nanolotra soavaly soavaly sy andiana mars Thoroughbred anglisy ho an'ity stud ity, izay fanomezana avy amin'ny lohahevitra frantsay. Ity zava-misy ity, vita Ny faritra amin'ity karazany ity dia namboarina indray, namindra ireo biby ireo ho any Lasarte tamin'ny 1941, mba hibodo ny toeram-pambolena Lore-Toki, izay efa nisy ilay toeram-pambolena stud tsy misy an'i Alfonso XIII ankehitriny.
Ny fanjakana dia nahazo ity toeram-pambolena ity tamin'ny mpandova an'i Alfonso XIII ho fanampin'ny an'ireo mpifanila vodirindrina amin'i Ollo sy Amassorrain, nampivondrona ny tany rehetra ho an'ny toeram-piompiana mpianatra ho Lore-Toki.
Raha mbola nitranga daholo ireo voalaza etsy ambony ireo, ny Fantsom-pifamoivoizana ao amin'ny Yeguada Militar, monina ao Madrid.
Amin'izao fotoana izao ny Lore-Toki Military Stud sy ny hazakazaka azo antoka miankina aminy, manohy ny asany fampiroboroboana ny fiompiana Thoroughbred anglisy ao amin'ny tranoben'i San Sebastián sy Lasarte. Tamin'ny taona 2008 ihany koa Nampidirina ny fiompiana soavaly Anglo Arabo.
Caballar de Mazcuerras Ivotoerana fiompiana miaramila (Cantabria)
nisy Noforonina tamin'ny 2006 tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny Lore-Toki Military Stud, ny Ibio Military Stud ary ny Santander Stallion Depot. Na izany aza, ny Lore-Toki Military Stud dia ho lasa ivon-toerana mahaleo tena ary izany no antony niresahantsika azy io taloha.
Ny Deposition Santander Stallion dia noforonina tamin'ny 1920 vokatry ny fampiharana ny fanavaozana ny drafitra Cría Caballar tamin'ny 1919.
Yeguada Ibio dia noforonina tamin'ny taona 1972 niaraka tamin'ny fividianan'ny State of the farm antsoina hoe "Casa de la Guerra" ao amin'ny Mazcuerras (Cantabria). Io toeram-pambolena io dia nitombo hatramin'ny 30 Ha ka hatramin'ny 85 Ha.
Ao amin'ny Mazcuerras izao dia misy ivon-toerana fiompiana soavaly miaraka amin'ny Stallions amin'ireo karazany espaniola misy toetra mampiavaka ny Sport, Purebred Spanish, Anglo-Arab, Hispano-Arab, Purebred Arab, Breton ary Hispano-Breton. Ny foals dia ahodina mandra-piverin'izy ireo any amin'ny Royal Guard, ireo toby miaramila isan-karazany ho an'ny fiompiana soavaly, ny mpiambina sivily ary ny polisim-pirenena.
Ivontoerana fiompiana miaramila Caballar de Zaragoza
Ity ivon-toerana ity ao amin'ny Vatan'olon-tokana ao amin'ny Ministeran'ny Fiarovana "Fiterahana soavaly ny tafika". Tao amin'ny fananana ambanivohitra Torre de Abejar any Garrapinillos no misy azy.
Ny toeram-piompiana ankoatry ny fiasa mifandraika amin'ny fiompiana zana-kazo, Misy faritra fiandrasana ala ho an'ny alika sy boriky Catalan.
Tamin'ny voalohany, dia Deposit isa 5 an'ny Stallions, manana anarana samihafa mandra-pahatongan'ny ankehitriny azony tamin'ny 2007. Toy ny tranga teo aloha, natambatra ny Stallion sy ny Mare Depots.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Toeram-piompiana miaramila sy ny foibeny any Espana